“Kampala waxaa ka socda gorgortan …hoggaanka baarlamaanku ma aha hoggaan daacad u ah dalka & dadka” R/wasaare Farmaajo. – Radio Daljir
“Kampala waxaa ka socda gorgortan …hoggaanka baarlamaanku ma aha hoggaan daacad u ah dalka & dadka” R/wasaare Farmaajo.
Muqdisho, Jun 07 – R/wasaarahada dawlada federaalka ah ee Somaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay is-maandhaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxada dawlada federaalka ah.
R/wasaare Farmaajo ayaa si ba’an u dhaliilay afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan oo uu ku tilamaamay mid dantiisa gaarka ah ka horumarinaya tan ummadda, carqaladna ku ah horumarka siyaasadeed ee ay xukuumadiisu hanatay mudadii ay jirtay.
“Hogaanka baarlamaanku ma aha hoggaan daacad u ah dalka iyo dadka” ayaa uu yiri R/wasaare Farmaajo, kuna eedeeyey afhayeenku in uu ka dhigay golaha wakiilada xafiis isaga u gaar ah oo markii uu doonana uu furo, markii uu doonana uu xiro.
Mar uu ka hadlay halka ay hadda xaajo marayso ayaa uu sheegay in afhayeenku hadda soo jeediyey in hal sano loo kordhiyo hay’adaha dawlada oo dhan.
“Sheekadu waxaa ay hadda marayasaa in la yiraahdo dhawr wasiir ha nala siiyo, xukuumada la bedalo” ayaa uu yiri R/wasaare Farmaajo.
Mar uu ka hadlay xal u helida khilaafaadka madaxda dawlada ayaa uu sheegay in ay sameeyeen dadaalo badan oo ay doonayeen in lagu soo afjaro xarig-jiidka siyaasadeed, balse lagu guul daraystay, sababna uu u ahaa afhayeenka baarlamaanku.
Afhayeenka ayaa uu ku eedeeyey in ay xukuumada u gudbiyey qoraalo iyo talooyin ku saabsan sidii looga gudbi lahaa xilliga kala-guurka, balse afhayeenku aanu u gudbin xldhibaanada, taas oo uu ku sifeeyey in ay tahay dambi.
Waxaa uu intaas ku daray ay ku qaadatay in uu la kulo afhayeenka baarlamaanka muddo 3 bilood ah, halka uu ku sifeeyey baarlamaankii in uu noqday wax shakhsi iska leeyahay.
Waxaa uu intaas ku daray in aanu aqbali doonin in gorgorton la galiyo maslaxada iyo mustaqbalka ummadda Somaliyed, ayna khasab tahay in ummadda Somaliyed ay aayaheeda ka tashato.
Shacabka ayaa uu baaqay in ay kacdoon sameeyaan, mudaaharaado dhigaan, kana soo horjeestaan siyaasada danaysiga ku salaysan.
“Kaaintii dhacabka Somaliyed iyo xildhinbaanada Somaliyed ayaa dhiman” ayaa uu ku daray.
Shirkii June ee ay hore u iclaamisay xukuumadu ayaa uu sheegay in uu baaqday, aanayna suurtagal ahayn in uu hirgalo.
Waxaa uu bogaadiyey hawlgallada ay ciidanka dawlada iyo kuwa AMISOM in dhawaale ka wadeen magaalada Muqdisho oo uu sheegay in la wareegeen goobo iyo xaafado muhim u ah, kana tarjumi kara waxqabadka dawlada.
Hadallada R/wasaare Farmaajo ayaa ku soo beegmaya kadib warar ka soo baxay shirar wadatashi ay oo ka socda Kampala oo dhigaya in heshiis nuxurkiisu yahay in la kala diro xukuumada lagu qaaray Kampala, ayna aqbaleen M/weyne Shariif Axmed iyo afhayeen Shariif Xasan, balse ay qalbi-jab ku riday R/wasaare Farmaajo oo aan laga talo gelin heshiiska; go’aamada heshiiska ayaa waxaa ka mid ah in xil kororsi hal sano ah oo la sameeyo golayaasha dawlada.